Annaga nagu saabsan - Foshan Qianbei Hardware Furniture Co., Ltd.
waxaa la aasaasay 2013.
Foshan Qianbei Hardware Furniture Co., Ltd. waxaa la aasaasay 2013.
Waa shirkad ganacsi oo kala duwan oo isku dhafan wax soo saarka, iibinta iyo cilmi-baarista iyo horumarinta.Shirkadda waxaa ka go'an soo saarista iyo horumarinta agabka elektiroonigga ah ee xirfadleyda ah, oo ay ku jiraan saddex shay oo waaweyn: miiska ciyaaraha, miiska kor u qaadista iyo kursiga ciyaarta.
Alaabooyinkeedu waxay ku habboon yihiin miisaska ciyaaraha guriga iyo kuraasta, iyo sidoo kale kafateeriyada internetka, kafateeriyada internetka ee cusub, iyo alaab guri oo kala duwan oo gaar ah oo loogu talagalay ciyaaraha gacanta iyo hoolalka ciyaaraha E-sport.
Nagu soo Biir sidaan u LABAYNAYNO ADUUNKA CIYAARTA!
Kooxdayada horumarinta wax soo saarka waa ciyaartoy waxayna si joogto ah u raadiyaan isbeddellada ugu dambeeyay ee ciyaaraha si ay bulshada ugu keenaan alaab cusub.TwoBlow ayaa si weyn u koray iyada oo ay ugu mahadcelinayso diiradda ay saartay alaabooyinka tayada sare leh, naqshadeynta heerka sare iyo ballan qaadka ballaarinta.
Laga soo bilaabo bilawgii Shiinaha, si uu u noqdo magac caalami ah oo laga aqoonsan yahay warshadaha, TwoBlow hadda waxay iibisaa badeecada ku dhawaad ​​​​qayb kasta oo adduunka ah oo ay ku jiraan Ameerika, Yurub, UAE iyo Australasia.
Laga soo bilaabo bilawgii aasaaskeeda, shirkadu waxay ku jirtay meelaynta wax soo saarka alaabooyinka tayada sare leh.
Laga soo bilaabo miisaska kafateeriyada internetka iyo kuraasta ilaa miisaska ciyaaraha iyo kuraasta, waxaan had iyo jeer u qaddarinay tayada sida heerka badbaadada ee shirkadaha,ilaa boqollaal unug iskaashatooyin ah, kuwaas oo ka tarjumaya jidka horumarka ganacsigeena sanadihii la soo dhaafay: "Credit for development, quality for survival!"
TwoBlow wuxuu ka dhashay fikrad fudud: In dib looga fikiro mid ka mid ah qaybaha aadka loo qiimeeyo ee qalabka ciyaaraha oo loo beddelo wax ka caawiya ciyaartoydu inay si fiican oo caafimaad qabaan u ciyaaraan.
Waa mudnaanteena no.1 si loo hubiyo in bulshadeena ciyaaraha ay aad ugu qanacsan yihiin alaabada ay helaan.Taasi waa sababta dhammaan alaabta TwoBlowsi madaxbanaan ayaa loo kormeeraa si loo hubiyo inay dhaafeen dhammaan heerarka EU iyo USA, si loo hubiyo tayada iyo badeecada badbaadada leh adiga iyo qoyskaaga.
Kooxdayadu waxay ka kooban tahay khabiiro kala duwan laakiin marka hore, dhammaanteen waxaan nahay ciyaartoy!Waxaan muhiimad sare siineynaa xaqiiqda ah in qof kasta oo nala shaqeeya uu garan karo baahida iyo rabitaanka ciyaartoyda.Hadafkayagu kama koobna oo kaliya soo saarista miisaska laakiin sidoo kale waa inaad hubisaa inaad ku raaxaysato ciyaaraha sida ugu macquulsan!